जोआन टकर को हो? अभिनेता को 'Burberry Centaur' विज्ञापन को रूप मा एडम चालक पत्नी को बारे मा सबै एक उन्माद अनलाइन प्रशंसक पठाउँछ - पप संस्कृति
जोआन टकर को हो? अभिनेता को 'Burberry Centaur' विज्ञापन को रूप मा एडम चालक पत्नी को बारे मा सबै एक उन्माद अनलाइन प्रशंसक पठाउँछ
Burberry को लागी एडम ड्राइभर को नवीनतम वाणिज्य तूफान द्वारा इन्टरनेट लेएको छ। लक्जरी फेसन ब्रान्ड अभिनेता आफ्नो नयाँ पुरुष सुगन्ध, Burberry हीरो को लागी एक विज्ञापन मा चित्रित गरीएको छ।
विज्ञापनमा एडम ड्राइभर एक घोडा संगै समुद्र तट मा दौडिरहेको देखिएको छ FKA Twigs द्वारा दुई हप्ता पृष्ठभूमि मा खेल्छ। घोडा संग पानी को मुठभेड पछि एक अभिनेता एक centaur मा morphing संग विज्ञापन समाप्त हुन्छ।
प्रस्तुत गर्दै #बर्बेरी हीरो , Burberry सौन्दर्य बाट नयाँ सुगन्ध द्वारा मूर्त रूप #एडम ड्राइभर
द्वारा निर्देशित #जोनाथन ग्लेजर एकेडेमी फिल्महरु को
संगीत: FKA twigs द्वारा 'दुई हप्ता' #बुर्बेरी #BurberryBeauty pic.twitter.com/vPVCqp7rEr
- बरबेरी (urBurberry) जुलाई २,, २०२१
Burberry को विज्ञापन रिलीज पछि तुरुन्तै भाइरल भयो, सयौं छोडेर प्रशंसकहरु स्टार वार्स अभिनेता माथि झगडा। एडम ड्राइभर Burberry बताउनुभयो कि उनी ब्रान्ड संग सहयोग गर्न धेरै खुसी थिए।
ड्रैगन बल सुपर को नयाँ एपिसोड
३ 37 वर्षीय बालक HBO को हास्य श्रृंखला, केटीहरु मा उनको उपस्थिति पछि दिल जितेको छ। जे होस्, हार्टथ्रोब अभिनेत्री जोआन टकर संग विवाहित छन्। यो जोडी २०१३ मा विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए र आठ बर्षदेखि सँगै छन्।
एडम ड्राइभरकी श्रीमती जोआन टकरलाई भेट्नुहोस्
जोआन टकर एक अमेरिकी अभिनेत्री हुन् जुन २०१ political को राजनीतिक नाटक, द रिपोर्ट मा उनको भूमिका को लागी परिचित छन्। २ June जून १22२ मा ब्रुकलिनमा जन्मेकी ३-वर्षीयाले २०११ मा लफ्टको साथमा पर्दामा डेब्यू गरेकी थिइन्।
अभिनेत्री धेरै ब्रॉडवे प्रोडक्शन्सका साथै गिभ वा टेक र गेबी जस्ता फिल्महरुमा अभिनय गरे। टकर एडम ड्राइभर संगै केटीहरु को हेलो किट्टी एपिसोड मा देखा पर्‍यो।
Joanne Tucker र एडम ड्राइभर कथित न्यू योर्क को प्रतिष्ठित Juilliard स्कूल मा साथी विद्यार्थीहरु को रूप मा भेटे। २०० in मा स्नातक गरेपछि, जोडीले आर्ट्स इन द आर्म्ड फोर्सेस (एआईटीएएफ) को स्थापना गरे, सेनाहरुमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको लागी एक गैर नाफामुखी कला प्रोग्रामिंग संगठन।
Tucker वर्तमान मा संगठन को कला निर्देशक हो। यद्यपि यो थाहा छैन जब यो जोडी शुरू भयो डेटि , उनीहरुले २०१२ मा औपचारिक रुपमा आफ्नो सगाई घोषणा गरे। दम्पतीले अर्को बर्ष एक निजी विवाह समारोह मा विवाह गरे।
यो जोडीले कथित रुपमा सन् २०१ 2016 मा आफ्नो पहिलो सन्तानलाई स्वागत गरेका थिए। तर, एडम ड्राइभरका छोराको बारेमा धेरै थाहा छैन किनकि उनी प्राय आफ्नो निजी जीवनलाई सार्वजनिक नजरबाट टाढा राख्छन्।
कसरी झूट बोले पछि विश्वास प्राप्त गर्न
प्रशंसक एडम चालक Burberry वाणिज्यिक प्रतिक्रिया
एडम ड्राइभर HBO को कमेडी ड्रामा श्रृंखला, केटीहरु संग चर्चामा आए। उनले शो मा एडम Sackler को आफ्नो चित्रण को लागी तीन प्राइमटाइम एमी नामांकन प्राप्त गरे।
को अभिनेता लिंकन, मौन, फ्रान्सिस हा, हंग्री हार्ट्स र प्याटरसन जस्ता प्रमुख फिल्महरुमा देखा पर्न गए। उनी स्टार वार्स त्रयी मा काइलो रेन खेले पछि प्रसिद्धि मा गयो। उहाँले BlacKkKlansman र विवाह कथा को लागी दुई एकेडेमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त गर्नुभयो।
आफ्नो आलोचनात्मक र व्यावसायिक सफलता को अतिरिक्त, एडम ड्राइभर पनि एक विशाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसक-फलो्ग amassed। Burberry संग उनको पछिल्लो व्यावसायिक प्रशंसकहरु लाई एक उन्माद मा पठाइयो, धेरै ट्विटर तिर आफ्नो प्रतिक्रिया साझा गर्न को लागी:
उनी भयानक आत्म सचेत हुनुभएको छ र उनी एक बरीबेरी सुगन्ध को लागी मोडलि to्ग गर्न को लागी बदसूरत छन् भन्ने विश्वास बाट। एडम चालक तपाइँ ✨everything✨ हुनुहुन्छ pic.twitter.com/FW09DHxBgT
- ً (itwhitenoisemovie) जुलाई २४, २०२१
यदि कसैले सोध्छन् 'महिला टकटकी के हो'? जवाफ छ: #एडम ड्राइभर को लागी अभियान #बुर्बेरी pic.twitter.com/ebWBMPx7t6
- AdamDforever (damAdamDforever) जुलाई २५, २०२१
मलाई आज यो चाहियो। pic.twitter.com/2lx2i7VspB
ब्रेक अप पछि तपाइँका साथीहरुलाई के भन्नु हुन्छ
- ब्रावो को क्वीन्स (@queensofbravo) जुलाई २,, २०२१
कति पटक तपाइँ एडम ड्राइभर Burberry वाणिज्यिक देख्नुभयो?
- टेडी (@teddypattinson) जुलाई २,, २०२१
burberry: के तपाइँ एम को लागी हाम्रो नयाँ सुगन्ध को अनुहार बन्न चाहानुहुन्छ?
एडम चालक: *टाढा हिड्न थाल्छ *
burberry: तपाइँ एक CENTAUR मा फर्काउनुहुनेछ
एडम चालक: pic.twitter.com/iJuxvcjkox
- अलेजान्ड्रा (ADSADVlLLAIN) जुलाई २,, २०२१
कि एडम चालक Burberry विज्ञापन pic.twitter.com/7hMsAXbeW1
- ~ (ivleivinzzz) जुलाई २,, २०२१
एडम चालक Burberry विज्ञापन सामान्य मा पुरुषहरु को मेरो यथार्थवादी दर्शन को लागी अन्तिम स्ट्रोक थियो। अब कुनै पुरुष, केवल एडम चालक।
- ओलेग, यो रोटी हो ° • • ° ° (izGizSkyriser) जुलाई २,, २०२१
अर्को कारण के हो कि हामी हाम्रो महासागरहरु लाई बचाउन र बचाउनु पर्छ कि कहीं बाहिर, एडम चालक Burberry अत्तर मा एक centaur पौडी खेल्ने को रूप मा अवस्थित छ।
- Averil (@TheAveengers) जुलाई २,, २०२१
एडम ड्राइभर लाई डब्ल्यूएचओ ले त्यो शर्टलेस बर्बरी फोटोशूट गर्न दियो म मानसिक रूप मा स्थिर छैन यस संग सम्झौता गर्न को लागी
- जेन वुड (ennjenniferywood) जुलाई २,, २०२१
म उसलाई घोडा पौडी संग एडम चालक/Burberry वाणिज्य देखी र म --- pic.twitter.com/i5bOgV7ToV
आगो wwe को महान बलहरु
- सेलेस्टाइन मार्टिन * अन्तर १ सेप्टेम्बर सम्म * (ellyjellybeanrae) जुलाई २,, २०२१
प्रतिक्रियाहरु को रूप मा अनलाइन मा जारी गर्न को लागी जारी छ, यो देख्न को लागी बाँकी छ यदि एडम चालक भविष्य मा Burberry संग उनीहरुको हालको सफलता पछि सहयोग गर्ने छ।
यसै बीच, अभिनेता रिडले स्कट को आगामी ऐतिहासिक नाटक, द लास्ट द्वंद्वयुद्ध मा, मैट डेमन र जोडी कोमर संग देखा पर्न को लागी सबै सेट छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: मार्वल-डीसी क्रसओभर: जेम्स गन पछि, सुसाइड स्क्वाड निर्माताले यसलाई भविष्यको सम्भावनाको रूपमा दाबी गर्छन्
Sportskeeda लाई पप संस्कृति समाचार को कवरेज सुधार गर्न मद्दत गर्नुहोस्। अब ३ मिनेट सर्वेक्षण लिनुहोस् ।
कसरी सबै समय sexier महसुस गर्न को लागी
संकेत उनी तपाईंलाई मनपर्छ तर प्रतिबद्ध गर्न डराउँछन्
कसरी बताउन यदि उनी दिमाग खेल खेल्दै छन्
मेरो कुनै रुचि वा शौक छैन
अब कसरी बस्ने